Taariikhda My Butros » Kara xasaasiyad Butros iyo saanqaadi Dating?
Last updated: Jan. 12 2021 | 2 min akhri
Sidaas, aad qof in aad rabto in aad hesho si fiican tahay inaad ogaato helay. Marka aad la hadleysid, haddii in qof ama online, waxaa jira dhoola on wajigaaga. You feel that things couldn’t get any better than they are, oo markaas waxaad ku baran in ay haystaan ​​xayawaan rabaayad ah in aad xasaasiyad. Waa maxay qofka in uu sameeyo? Waxaad u baahan doontaa in la siiyo ilaa on xiriirka ay sabab u tahay xasaasiyad aad? Ma jiraan wax kale ee looga kuma qofka mar arkaya? Dadka intooda ugu badan, waxaa jira.
Ugu horeyn, socodsii qofka in aad qabto xasaasiyad ah. Tani waa u muhiim ah in xiriir furan oo daacad ah (si ay u bilowdo), iyo sidoo kale laga yaabaa inay awoodaan inay yarayso dareen-celin ah in aad leedahay. Ay Sidee tani samayn kartaa? Waxay hubin doonaan in ay gashan yihiin dhar cusub ka hor taariikhda ka dhigi kartaa (isagoo dhexgalka ma leh xayawaanka ka dib markii ay labistay). Intaa waxaa dheer, ay ku yeelan karaan burush dun ama wax la mid ah si ay u isticmaalaan ka dib markii ay yimaadaan si aad u taariikhda (if their pet rides in the car and there is a transfer from the car to their clothes).
Bedka soo socda la dhugto in la ogaado heerka uu gaarsiisan yahay xasaasiyad aad. Waxaad qaadan kartaa OTC daawo xasaasiyad oo ay awoodaan in ay la tacaalaan fiidkii? Ama waxaad yeelan doontaa cadaanyo ba'an ama daran oo u baahan doonaa EpiPen ah? Ee ah kuwa u baahan in EpiPen ah, waxaad u baahan doontaa in la qiimeeyo xidhiidhka heer weyn, because literally, your health is at risk. Kuwa kale, kaliya waxaad samayn kartaa hubiyo in aad qaadato daawo xasaasiyad ka hor wada qaadan iyaga la, oo markaas socdo dareenkaagu sida habeenkii ay socoto.
Haddii aad waqti badan meeshoodii, waxuu samaysan karaa qol ay ku jiraan xayawaanka ugu lama oggola. Sida lakabka ah ku daray of ilaalinta, ay ku yeelan karaan orodka mashiinka shaandhaynta in ay sii xasaasiyadda ka soo hawada. Waxaa jira waxyaabaha badan oo ku saabsan suuqa ugu xanuunkaas xasaasiyad ah. Waxyaabahani hoos u dhigi doontaa qadarka dufta hawada, ama shaqeeyaan sidii xayndaab in ay sii xasaasiyadda ku soo galaan boos loogu talagalay.
Dadka xasaasiyadda leh ugu, ay horey u yeelan doonaan, kuwaas oo taas sii dheer iyaga la, laakiin ma yeeli doonaan inuu ku celiyo iyaga. Hubi in aad mar walba leeyihiin unugyo at gacanta. Haddii aad qabto xasaasiyad oo keeni cuncun, indhaha biyood oo dheeraad ah, aad dareento in laga yaabo in yar soo jiidasho leh si aad taariikhda haddii aad sanka waxaa si joogto ah loo maamulo ama ay u egtahay sidii aad ku qaylin jiray. Waxaad heli kartaa isha xasaasiyad qaarkood lagu dhibciyo kula sidoo. This will not only help flush the allergens from your eyes but will also help with the redness and irritation that will be present.
Ma xajiinta sababta in aad qufacdo? Dhibcood, qufaca iyo kiniinka cunaha waa lagama maarmaan in la helo taariikh stress hoos. How many times have you gotten a tickle in your throat and the more you cough the drier your throat gets? Lozenges Qaar ka mid ah ama xitaa naca adag qoyaan kaliya ku filan ku dari kartaa in ay qaataan xanxanto ka fog iyo jubbad, iyo hunguriga si aad u xamili karto taariikhda.
Iyada oo furan, isgaarsiinta daacad ah oo yar diyaarinta ah, weli waad heli kartaa xiriirka oo lagu raaxaysan karo inkastoo aad qabto xasaasiyad ah in ay xayawaanka.
5 Waxyaabaha Girls Ma Ka dib markii weyni ka a
5 Qaas Xagaaga Fikradaha Taariikhda